Ireo lovia mahazatra 7 any Mexico izay tokony andramanao | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 28/04/2021 13:28 | gastronomy, México
Ny miresaka sakafo Meksikana no voalohany, miresaka momba ny gastronomie voasokajy ho Lova ara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana ny zanak'olombelona nataon'i UNESCO. Ity toe-javatra ity dia hanome anao hevitra ny maha-zava-dehibe sy manankarena an'i Mexico amin'ny resaka lovia ao aminy ary maninona izahay no manome an'ity safidy lovia Meksikana 7 mahazatra tsy azonao adino ity.
Raha ny marina dia miatrika ny iray amin'ireo sakafo fahandro miovaova eran'izao tontolo izao isika, na amin'ny lafiny fangaroany na amin'ny fahasamihafana eo amin'ny sakafony. Azontsika atao ny milaza fa ny fanjakana tsirairay ary na ny tanàna tsirairay aza dia samy manana ny lakozian'izy ireo. Na izany aza, hiresaka aminao momba ny sakafo mahazatra any Meksika amin'ny ankapobeny izahay, izany hoe an'ireo fomba fahandro mahazatra ny firenena manontolo.
1 Sakafo mahazatra any Mexico: tantara vitsivitsy
2 Lovia fito mandrafitra ny sakafo mahazatra any Meksika
2.1 Ny taco
2.2 Burrito sy fajitas
2.3 Ny mole, kilasika iray hafa eo amin'ireo sakafo mahazatra any Mexico
2.4 Ilay kisoa kely Pibil
2.5 Escamole sy valala
2.7 Ireo tsindrin-tsakafo: ny vatomamy tsaramaso
Sakafo mahazatra any Mexico: tantara vitsivitsy
Ny gastronomy any Meksika ankehitriny dia vokatry ny synthesis ny substrate talohan'ny Columbian sy ny lova Espaniola. Afrikanina, aziatika, Afovoany Atsinanana ary koa ny fitaomana frantsay dia nampiana an'io. Avy amin'ny tontolo talohan'ny Hispanika dia naka ny akora fampiasa ao aminy. Ohatra, katsaka, sakay, tsaramaso, voatabia, zavokà ary zava-manitra marobe toa ny papalo, ny epazote na ny ravina masina.
Fa izy rehetra dia niaraka tamin'ny avy any Eropa toa varimbazaha, vary, kafe ary koa anana manitra toa ravina bay, komina, oregano, tombo-kazo na coriander. Tonga niaraka tamin'ny Espaniola aza izy ireo hena toy ny henan-kisoa na akoho y voankazo toy ny voasary, voasarimakirana na akondro.
Araka ny efa nolazainay taminareo, ny vokatr'izany rehetra izany dia sakafo nahandro notondroin'ny ny fahasamihafana eo anelanelan'ny fanjakana samihafa mandrafitra ny firenena Aztec. Tsy mitovy ny miresaka momba ny gastronomikan'i Baja California fa tsy ny miresaka momba an'i Chiapas mihitsy. Fa ny sakafo mahazatra rehetra any Meksika dia manana marimaritra iraisana. Azontsika atao ny milaza fa izany rehetra izany dia mifototra amin'ny akora ilaina katsaka, sakay ary tsaramaso, ary koa amin'ny azo antoka teknika mahandro sakafo lalao izany.
Lovia fito mandrafitra ny sakafo mahazatra any Meksika
Ny karazan-tsakafo marobe izay mandrafitra ny nahandro Meksikana dia tsy ahafahanay mamintina azy ireo amin'ny lahatsoratra iray. Noho izany, izahay dia hifantoka amin'ny lovia fito mahazatra izay hitanao amin'ny faritra rehetra ao amin'ny firenena, avy Sonora ny Veracruz (avelanay ianao eto misy mpitari-dalana ho an'ity tanàna ity) ary avy amin'ny Jalisco ny Quintana Roo. Noho izany, hatolotray anao ny tolo-kevitray momba ny gastronomika avy any Mexico.
Angamba izy ireo no lovia malaza indrindra an'i Mexico, hatramin'ny nahatongavan'izy ireo nihoatra ny sisintaniny ary ankehitriny dia hita na aiza na aiza eran'izao tontolo izao. Zava-dehibe tokoa izy ireo amin'ny sakafo ao amin'ny firenena izay noforonin'ny mponina mametraha fehezanteny miaraka amin'izy ireo. Ohatra, ny "manipy taco" dia mitovy amin'ny hoe hihinana na "amin'ny tsy fisian'ny fitiavana, pasitera alika tacos al."
Mahaliana fa tsy mora ny manomana ny fomba fahandro anao. Momba izany tortillas lafarinina katsaka na varimbazaha ao anatiny no ametrahana akora iray. Ary eto indrindra no misy ny sandan'ny taco satria, miankina amin'ny zavatra ananany ao anatiny, dia manome lovia maro be izy ireo ary mahazo anarana samihafa. Fa ny roa amin'ireo malaza indrindra dia:
Taco pasitera. Efa niresaka azy ireo izahay, fa kosa holazainay aminao izay misy azy ireo. Raha ny mahazatra, kisoa voahosotra no nameno azy io, na dia mety ho lo aza. Ity marinade ity dia voaomana miaraka amin'ny zava-manitra, achiote ary sakay mena. Ny tongolo, mananasy ary voanio dia ampiana ihany koa, ary koa saosy maro karazana.
Taco volamena. Amin'izy ireo dia vita amin'ny henan'akoho, tsaramaso ary ovy ny famenoana. Nendasina tamin'ity fomba ity izy ireo avy eo nampiana fromazy sy salady ary saosy. Any amin'ny faritra sasany dia nohanina miaraka amina saosy maitso na ron-kena akoho izy ireo izay anaoka azy ireo.
Burrito sy fajitas
Burrito, kilasika amin'ireo sakafo mahazatra any Mexico
Na dia azo dinihina aza ny fomba fahandro hafa, dia mbola misy ihany Taco feno entana ny vokatra samihafa. Matetika izy ireo dia vita amin'ny karazana hena, dipoavatra, tongolo ary sakay. Ho fanampin'izay, miaraka aminy matetika izy ireo tsaramaso voaverina ary haingo hafa.
Afaka milaza aminao toy izany koa izahay momba ny quesadillas. Mofomamy katsaka ihany koa izy ireo, na dia mampiavaka azy ireo aza ny fromazy dia ampahany amin'ny famenoana azy ireo. Na izany aza, raha sahy manandrana zavatra iray tany am-boalohany ianao dia mangataha iray, ankoatry ny fangaro nentin-drazana, entina voninkazo voatavo.
Ny mole, kilasika iray hafa eo amin'ireo sakafo mahazatra any Mexico
Takelaka ny mol
Any amin'ny firenena Aztec, karazana saosy vita amin'ny sakay, dipoavatra ary zava-manitra hafa mandray ny anarana hoe tana. Avy amin'izany no ahazoana ny vita amin'ny zavokà sy ireo legioma ireo. Araka ny efa noheverinao fa efa niresaka momba ny guacamole, angamba ny saosy malaza indrindra any Mexico ivelan'ny sisintaniny. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, dia holazainay aminao fa efa tamin'ny andro talohan'ny Columbian izy io ary, ho an'ny Maya, dia nanana tandindona erotika izany.
Saingy, amin'izao fotoana izao, karazana saosy voafaritra kokoa dia antsoina hoe mole izay an'ny zaridaina mahazatra any Mexico ihany. Izy io koa no vita amin'ny sakay sy zava-manitra hafa, fa manana fijery sôkôla. Amin'ny alàlan'ny fanitarana, antsoina koa izy io hena na legioma vita amin'ny saosy vita amin'ity saosy ity.
Na dia samy manana ny fomba fahandro azy aza ny fanjakana tsirairay, ny tena ankasitrahana indrindra ao Mexico dia ny mole poblano. Tena nalaza tokoa io ka isan-taona no ankalazana ao Puebla un festival natokana ho an'ity saosy ity. Izy io dia vita amin'ny karazana sakay, voatabia, tongolo, tongolo lay, sôkôla mainty ary zava-manitra. Raha manandrana izany ianao dia tsy ho diso fanantenana.
Ilay kisoa kely Pibil
Pibil dia teny Maya izay nampiasaina hanondroana ny sakafo voaomana ao a lafaoro eto an-tany. Fantatra tamin'ny hoe pib ary eo no niavian'ny anaran'ity lovia ity. Tamin'ny voalohany, dia malaza amin'ny Saikinosy Yucatan, tany sarobidy azonao atao ny mitsidika izay atolotray ato amin'ity lahatsoratra ity. Saingy niitatra nanerana an'i Mexico sy manerana an'izao tontolo izao koa izany.
Anisan'ny Hena kisoa voahosotra anaty achiote, zava-manitra izay nampiasaina koa tamin'ny andron'i Columbian. Avy eo apetraka ao anaty lafaoro eto an-tany na mitovy aminy miaraka amin'ny tongolo mena, dipoavatra habanero ary voasary marikivy. Fonosina ravina akondro avokoa izany rehetra izany mba tsy ho maina izy ary avela masaka mandritra ny alina.
Raha ny lojika dia tsy vita amin'ny fomba nentim-paharazana intsony io lovia io, fa mbola matsiro ihany. Ho an'ny saosy dia tsy ny achiote ihany no miditra an-tsehatra, oregano, komina, menaka oliva, vinaingitra ary ranom-boasary marikivy ihany koa.
Escamole sy valala
Ampidirinay ao anatin'ny sakafo mahazatra any Meksika ity lovia ity satria ampahany io, saingy mampitandrina anao izahay fa, angamba, tsy tianao ny manandrana azy. Ny antony dia tena tsotra. Ny escamole dia vatokely olitra vatokely izay nohanina any amin'ny firenena Aztec hatramin'ny andron'i Columbian. Raha milaza aminao izahay fa nantsoina koa izy ireo "Ny caviar any Mexico", afaka mahazo hevitra momba ny fankasitrahan'izy ireo ianao. Matetika izy ireo no mihinana nendasina ary miaraka atody sy zava-manitra toy ny epazote.
Amin'ny lafiny iray, azonay atao ihany koa ny milaza aminao ny momba ny valala. Momba izany valala kely Izy ireo koa dia mihinana nendasina, na dia aperitif na amin'ny tacos sy quesadillas aza. Na ahoana na ahoana, dia samy atolotra ho an'ny paladia sahy.
Io mahery SOPA Anisan'izany, ankoatry ny ron-kena, ny voan-katsaka amin'ny karazan-cacahuazintle, hena akoho na henan-kisoa ary akora maro hafa. Anisan'izany, ohatra, ny tongolo, salady, laisoa, radish, zavokà, fromazy na kisoa.
Ary afaka mahita ny tenanao ianao karazana pozole maro. Na izany aza, tafiditra ao anaty sokajy roa daholo izy ireo: ny Blanco, tsotra kokoa satria tsy misy afa-tsy katsaka sy hena ary ny Masiaka, be pitsiny kokoa ary afaka manana tsiro masiaka be.
Tokony hikaroka ny niandohany koa isika talohan'ny andro Hispanika. Raha ny marina, ny anarany dia avy amin'ny Nahuatl tlapozonalli, izay midika hoe "nandrahoina" na "manjelanjelatra", na dia misy aza ny teôria hafa milaza fa tokony hanana ny anarany izy io posoli, teny iray avy amin'ny fiteny Cahita izay azo adika hoe "katsaka mahandro."
Ireo tsindrin-tsakafo: ny vatomamy tsaramaso
Tsy afaka mamita ny fitsidihanay ny sakafo Meksikana mahazatra izahay raha tsy miresaka momba ny tsindrin-tsakafo. Ny sasany mifanojo amin'izay fantatsika ao amin'ny firenentsika. Tsy very maina, efa nilaza izahay fa ny sakafo Meksikana dia manana singa Hispanika matanjaka. Izany no tranga Churros, ny paiso vary, ny fritters na ny jericallas, mitovy amin'ny mpiambina antsika.
Na izany aza, indizeny marina ny tsindrin-tsakafo hafa. Iray amin'izany ny vatomamy tsaramaso, vokatra iray amin'izao fotoana izao ao amin'ny gastr gastrikan'ny firenena Aztec. Izy io dia vita amin'ny ronono, atody atody, kanelina, siramamy, amandy notorotoroina, kennel ary vovoka katsaka, ho fanampin'izany, mazava ho azy, avy amin'ny tsaramaso nandrahoina tsy nasiana sira.
Fa malaza be koa izy ireo levers, karazana mofomamy izay voaomana amin'ny rano, tantely, voanjo tsy misy masira ary dibera. Afaka milaza aminao toy izany koa izahay sapote mainty, izay ny fotony dia ny voan'ny antsoina hoe hazo ary miaraka amin'ny atody, kanelina ary siramamy amin'ireo akora hafa. Liana be ny tsirony, mahagaga fa mitovy amin'ny sôkôla. Farany, atolotray ny mofo katsaka na katsaka vaovao amin'ny kalalao. Ho mamy azy dia manana ronono sy kanelina mifangaro izy miaraka amin'ireo akora hafa toy ny atody, dibera ary lafarinina. Mahafinaritra fotsiny.
Ho famaranana, efa nilaza taminay ny momba ny lovia fito izay manasongadina ny sakafo mahazatra an'i Mexico. Na izany aza, azontsika natao ny nampiditra ny hafa toa lasopy sokay, ireo malaza koban, ny tortilla chips na ny marquesitas. Mandrosoa ary andramo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » México » Lovia mahazatra 7 any Mexico izay tsy maintsy andramanao